Ungayifumana njani iTelegram ngaphandle kwe-Intanethi? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Unayo njani iTelegram ngaphandle kwe-intanethi?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 276
Ngaba unokucinga ukuba unakho ukuba neTelegram ngaphandle kokuba uqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-intanethi? Isicelo sokudlulisa umyalezo esidumileyo siyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha kwaye sizise izinto ezintle kubo bonke abasebenzisi baso. Ngesi sihlandlo, ikhuthaza ukhetho lokuba nakho ukufikelela kwiqonga ngaphandle kwe-intanethi.
Siyakumema ukuba uhlale nathi ngoku ukufumanisa eyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo yokuba neTelegram ngaphandle kwe-intanethi kwiselfowuni. Olu khetho luya kukuvumela ukuba uhlale unxibelelana nabafowunelwa bakho ngaphandle kwesidingo senkonzo esebenzayo ye-intanethi.
Kuyenzeka ukuba ufikelele kwiTelegram ngaphandle kwe-intanethi
Izicelo zemiyalezo ezikhawulezileyo ezinje ngeTelegram ziyaqhubeka nokuzibeka njengezona zixhobo zibalaseleyo ukuba abasebenzisi kufuneka baphile lonke ixesha elidityaniswe nabahlobo babo kunye nosapho.
Enye yezithintelo ezinkulu ezi ntlobo zeqonga zazisiwe kukuba ukufikelela kuzo kunye nokusebenzisa imisebenzi yabo uqhagamshelo oluzinzileyo lwe-intanethi lwalufuneka. Nangona kunjalo, ngoku kunokwenzeka ukuba ube neTelegram ngaphandle kwe-intanethi.
Nangona kunokwenzeka ukuba iTelegram ifakelwe kwiiselfowuni ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano lwe-intanethiKukwayinyani ukuba abantu kufuneka banonxibelelwano lokukhuphela usetyenziso ngaphandle kokuphazamiseka.
Oko kuthetha ukuba, sakuba sikhuphele isicelo ngoncedo lonxibelelwano lwe-intanethi, abasebenzisi baya kuba nakho ukuvula usetyenziso kwisixhobo sabo kunye nokufikelela kwizixhobo ezisisiseko ezinikezelwa liqonga lemiyalezo eyaziwayo kwangoko.
Into onokuyenza kwiTelegram ngaphandle kwe-intanethi
Kukho ukudideka okuninzi malunga nayo. Kukho abo bakholelwa ukuba iTelegram inokusetyenziswa ngaphandle kwesidingo se-intanethi, kwaye ngokuyinxenye kunjalo. Nangona kunjalo Asizukukwazi ukufikelela kuwo onke amanqaku esi sicelo.
Enye yezinto esingazukukwazi ukuzenza ngaphandle koxhumano lwe-intanethi yile thumela kwaye ufumane imiyalezo okanye iifayile. Kubalulekile ukuba uqhagamshelwe kwinethiwekhi ukuze ukwazi ukwabelana ngezi ntlobo zeefayile.
Kwaye asizukukhangela amaqela okanye amajelo kwaye sibajoyine. Ukwenza ezi zinto kufuneka sidityaniswe kwinethiwekhi ye-intanethi, kungenjalo isicelo asizukukwazi ukwenza uphando oluthile.
Kodwa ayizizo zonke iindaba ezimbi. Kukho izinto esiza kukwazi ukuzenza kwiTelegram ngaphandle kwesidingo sokuqhagamshelwa kwinethiwekhi ye-intanethi. Ezizi? Apha sikushiya ezinye zazo:
Ungafikelela kwifayile ye- uluhlu lonxibelelwano
Unokhetho lokubona Umxholo owugcinileyo kwilifu leTelegram
Unako kwakhona vala kwaye uvule abafowunelwa ngaphakathi kweqonga
Uya kuba nayo ukhetho ukubona zonke izingxoxo zakho ezivulekileyo kwaye ufunde iincoko ozigcine apho.
Ngaba ndibona iifayile zam ezikhutshelweyo ngaphandle kwe-intanethi?
Ewe kunokwenzeka. Ukuba sele unesicelo esikhutshelwe kwifowuni yakho kwaye ufuna ukufikelela kwiifayile zakho ezigcinwe kwilifu leTelegram, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alula:
Cinezela ngaphezulu kwemigca emithathu ethe tyaba
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Imiyalezo egciniweyo”Apho uya kubona zonke iifayile zakho ezigcinwe ukuza kuthi ga ngoku.
1 Kuyenzeka ukuba ufikelele kwiTelegram ngaphandle kwe-intanethi
2 Into onokuyenza kwiTelegram ngaphandle kwe-intanethi
3 Ngaba ndibona iifayile zam ezikhutshelweyo ngaphandle kwe-intanethi?
Isetyenziswa njani iTelegram?